FLM Manaja fepetra izay fiangonana te hisokatra
Taorian’ny fiangonana Fjkm sy ny Ekar Katolika dia nanao fanambarana ihany koa ny Fiangonana Loterana Malagasy omaly notarihin’ny filohany ny Pastora dr Rakotonirina David sady filohan’ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara.
Nambarany tamin’ izany fa afaka misokatra izay te-hisokatra saingy tsy maintsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana napetraky ny Fitondram-panjakana kosa izay efa nisaorany manokana ny fiangonana rehetra tamin’ny fankatoavana izany. Lohalaharana amin’ireny ny fitondrana arotava, ny fanasan-tanana mialohan’ny hidirana ao am-piangonana sy rehefa mivoaka, ny fanadiovana ny fiangonana, ilay elanelana 1 metatra…. Mikasika ny firaisana latabatra amin’i Tompo dia nomarihiny manokana fa tokony samy hitondra kapoakam-pandraisana ny tsirairay ho fiarovana amin’ny fiparitahan’ny COVID 19. Amin’ny mahafilohan’ny FFKM azy indray mikasika ny fanapahan-kevitra noraisin’ny fiangonana tsirairay dia nomarihiny manokana fa tsy asiana olana izay fepetra noraisin’ny fiangonana tsirairay avy mikasika ny fisokafany sy ny mbola tsy fisokafany. Ny zava-dehibe hoy izy dia iray tsy mivaky FFKM antony nahazoan’izy ireo ilay anaram-bositra hoe : betsimisaraka. Ankoatra izay hoy izy dia mitohy hatrany ny fotoam-pivavahana izay hiarahan’ireo filoham-piangonana efatra manao ka amin’ny Alahady ho avy izao dia ao amin’ny Fjkm Isotry Fitiavana no hanatanterahany izany, azo arahina mivantana ao amin’ny RNM sy TVM manomboka amin’ny 05 ora hariva.